Somaliland oo lagu martiqaaday kulan caalami ah oo Faransiiska lagu qabtay. |
Somaliland oo lagu martiqaaday kulan caalami ah oo Faransiiska lagu qabtay.
Safiirka JSL ee Faransiiska Md. Cali Ismaaciil Xasan ayaa lagu martiqaaday Carwo Ganacsiyeedka ugu weyn qaaradda Yurub oo ka dhacday dalka Faransiiska.
Kulanka ay ay khudbado ka jeediyey dad sare u dhaafay boqol madax shirkado, xukuumado iyo ururada bulshada ayaa lagu soo casuumay dadka hawlaha ganacsiga dhowaan bilaabay, kuwa shirkadaha waaweyn, ardayda, cilmi-baadhayaal waaweyn oo caalamka ka kala yimi ayaa hadafkiisu ahaa horumarinta ganacsiga caalamka iyo is-barashada da’yarta berri.
Qoraal kooban oo xafiiska JSL ee Faransiisku kaga hadlay 10 Octobar Carwada iyo martiqaadkii oo soo gaadhay warg Dawan iyo Telefishanka Qaranka ayaa lagu yidhi,